भाइरल ७० बर्षिय बुढाले फेरि अर्कि सौता ल्याइलिए ,पुजाले रुदै मनको व्यथा सुनाइन ! कान्छि झनै कडा। (भिडियो हेर्नुस् ) - Aajako Nepali Khabar
भाइरल ७० बर्षिय बुढाले फेरि अर्कि सौता ल्याइलिए ,पुजाले रुदै मनको व्यथा सुनाइन ! कान्छि झनै कडा। (भिडियो हेर्नुस् )
पछिल्लो समय यी माथिका कुराहरु उपर प्रतिक्रिया दिएको सो भाइरल जोडिले अहिले भने पुजा माथि अर्को सौता थपिदिएका छन् ।पुजा भन्छिन् कि अब ल्याइनै सको त गर्ने के अनि ती बुढा भन्छन् कि आफुले दुबैलाई झगडा गर्न नदिई राम्रो सग राख्ने प्रतिबद्धता जनाउछु भन्छन् बूढो ।कान्छि झनै कडा ।
सीसीएमसीकाे बैठक शुरू, लकडाउनको विषयमा सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना
अक्षय कुमारले को#रोना पीडितका लागि दिए एक करोड